UkuHlola nokuThola isiKhokelo sokuKhusela iispack
Iipakethi zeentambo ziphakamileyo ngeendlela ezimbini: Umthamo wangaphakathi (ubuninzi obungayithwala - obunikwe ngamasentimitha ama-cubit okanye iitalitha) kunye nobude bomlenze (okanye uluhlu lweelumgama ubude) ipakethe yenzelwe ukulingana.
Shiya i-random i-trial kunye nephutha kwi-Goldilocks, nangona-unako ukukhawulelana ngqo kwii-packpacks eziphambili ngokufunda indlela yokulinganisa ubude bakho obude kwaye uqikelele ukuba ungakanani umthwalo owenzayo owenzela uhambo olunikeziweyo.
Indlela yokulinganisa ubude bakho be-Torso kwi-Backpack
Ukulinganisa ubude bakho, uya kufuna i-tape yokulinganisa i-flexible and some help from a friend. Buza umhlobo wakho ukuba alinganise ukusuka kwisigxina esiphezulu esisezantsi entanyeni yakho ukuya kwindawo ephakathi kwama-hipbones akho. Isiphumo esiphumelayo sisithuba sobude oya kuthenga xa usenza iimbotyi.
(Fumana i ngongoma phakathi kwe-creaks yakho ye-iliac - oko kukuthi, amaphuzu aphezulu e-hipbones yakho-ngokubeka izandla zakho ezintanyeni zakho, iminwe yenkcazo kwii-hipbones zakho. Umgudu wakho umlinganisi angakwazi ukulinganisa ukuya kwinqanaba.
Ngaba Ndifuna Uninzi Kangakanani?
Bonke abakhiqizi bakhetha ubukhulu bepakethi ngokwemitha yeelitha okanye ii-intshi eziyi-intshi (ngokuqhelekileyo zombini); kodwa oko kuthetha ukuthini? Uluhlu olulandelayo lubhekiselele kukunika ingcamango yebhola ye-ballpark yintoni ubungakanani bepakethi oyifunayo ukuba luhlobo luni lokunyuka.
Ewe, ubungakanani bakho bepakethi obuya kuba buyahluka ngohlobo lweempawu zakho zokupakisha. I-hardcore ultralight backpacker inokukwazi ukulingana neentsuku eziliqela zeempahla kwi-qu'd ibe yimpuku enkulu yosuku lomnye umntu. Noko ke, umhambi wakho oqhelekileyo, mhlawumbi, unokungabi nolwabiwo-mali okanye owaziyo nge-ultra-encinci, i-ultra-lighting, i-gear ebiza kakhulu-oko kuthetha ukuba ipakethe enkulu yokwenza igumbi elikhulu.
Ukuba ungathandabuzeki, faka umthwalo wakho wokungena kwizinto ezikwimpahla embalwa (ngoko kulula ukuyisebenzisa) kwaye uyigqithele kwisitoreji sakho segesi ukuze uvavanyo-upake iipakethi ezimbalwa. (Ezininzi izitolo ziza kuba nezicathulo ezinokuthi uzalise iipakethi kunye nokuvavanya indlela ozizwa ngayo phantsi kwesisindo - kodwa oku akuyi kulungisa umxholo wesayizi.)
Uhambo lwemihla: ama-intshi ama-cubic 500 ukuya kuma-1,800 (8 ukuya ku-30 ​​ilitha)
Ukubeka ezi manani ngombono: I-pack ye-cubic-intshi ye-cubic-intshi e-500 isebenza ngokumalunga nomlinganiselo wokupakisha umthamo kwi-backpack ye-backergack, ngokuqhelekileyo ayincinane ngokwaneleyo ukugcina ifolda okanye ubungqina obukhulu. Xa upakishwa kwiigill, ipakethi ye-cubic-intshi ye-intshi ingabamba i-hydration bladder encinci (2L okanye encinci); umgca wokuqhawula umbane ophezulu kakhulu (phezulu nangaphezulu); ijeyiti yomoya engapheliyo / ipakethe kunye neengqayi, isikhonkwane esiluhlaza kunye neiglavu, i-quart-size size kit ephuthumayo , i- ice grippers , kunye nemibhobho emibini yokutya. Ndivame ukuphela ndiphethe ikhamera kwipokoth.
Ndiyayithanda le phakethi yeminiki emifutshane kwimozulu esichukumisayo - kodwa ukuba iimeko azikho mkhulu okanye awunayo inkqubo yakho yokupakisha idluliselwe ngoku nje, ndiyakucebisa ipakethe enkulu. (Ndiyayixabisa ukuba nephepha eliphakathi kwe-1,000 ukuya ku-1,700-cubic-intshi, ngokuxhomekeke kwimozulu kunye nobude bokunyuka kwam.)
Yintoni omele uyenze ngosuku lwakho lokuqala lwe-Dayhike ( uludwe lwepakethe oluphrintiweyo )
Iintsuku ezihamba ngeenyawo: ii-2,400 ukuya kwii-3 000 ii-cubic intshi (40 ukuya ku-50 ilitha)
Ndizama ukungayifaki ipakethi yam ipakethi ngamanqaku amancinci athengisa ngaphandle - kodwa ukugqithisa izinto ezinkulu njengepedi yakho yokulala okanye isikhwama ukuya phezulu okanye ngaphantsi kwepakethi yakho yindlela elula yokwenza (ngokulinganayo) i-backpack isebenze ubusuku bobusuku ukunyuka. Bump ukuya kutsho obukhulu xa uhamba ngebusika okanye awuyi kuba nekampu kufuphi nomthombo wamanzi, ngoko unako ukuthabatha amacandelo athile kunye namanzi ngokulandelanayo.
Yintoni ekufuneka uyenze kwi-Hikeight Hike (uluhlu lokupakisha oluphrintiweyo)
Yaye ke, ukuba unayo imali yokutshala imali kwi-gear ultralight (okanye ukwazi indlela yokwakha eyakho), unako ukufumana i-pack encinci kunye nelula.
Uhambo lwe-Back-packed Night-Multi-Night: 3,000 cubic intshi (50 ilitha) kunye phezulu
Uhambo oluhamba ngobusuku obuninzi lufuna zonke izicwangciso ze-overnighter.
Intente yakho, i-pad yokulala, isikhwama sokulala kunye neenkqubo zokupheka (kubandakanywa isitofu, ibhothi (s), izinto (izinto) kunye nepetro) zizinto ezininzi kakhulu. Ngenxa yokuba uya kuphuma ixesha elide, uya kufuna enye into engasetyenziswa okanye isetyenziswe ngasiphi na indlela: uphethiloli, ukutya okuninzi, kunye neendlela ezinokubakho ngaphezulu kweengubo.
Ezinye izizathu ezifanelekileyo zokukhetha ipakethe enkulu zibandakanya ukuba uphaphaza imoto ngaphezu komntu omnye, ufumana isimo sezulu esingalindelekanga, ukuhamba kunye nezingane okanye ezifuywayo, okanye mhlawumbi ngokucacileyo kufanelana nesitayela sakho esingcono. Khumbula, akukho nto okanye iphosakeleyo xa kuziwa kule nto - kukho kuphela okukusebenzayo.
Ezinye iipakethe ezinkulu - ngokukodwa xa ungena kuloluhlu lwesayizi-intsimi-nikela iibhondi eziphezulu ezithatha kwaye ziguqule kwiipakar packs zokuhamba kwemini. Le nto ibalulekileyo, ngokukodwa ukuba uya kubeka inkampu yeentaba ezintabeni uze uhlolisise apho.
ILizwi malunga neNkqantosi yokuChoxiswa kunye neZiNcedisi zangaphandle
Iingcingo zokunyanzelisa zikhulu. Bahlala bephethe umthwalo wokungena kwiipakethe ezinkulu, kwaye banceda ukugcina iipakethe ezincinane ezilayishiwe ngokukhululeka okunokuthi zigijime kunye nomzimba wakho. Kwi-pinch, ungasebenzisa kwakhona ii-straps zoxinzelelo zokubamba izinto ezingaphezulu kwipakethi yakho.
Ezinye iinkalo zokuxhumeka zangaphandle zingafumaneka ngokufanelekileyo. Ndiza kukhangela ipakethe enezinto ezimbini ezinamathiselwe kwiipali zakho zokuhamba , xa unokugqiba ukuzithwala. Amangxuma angaphandle asebenza ngokufanelekileyo ukugcina ugcino lwangaphandle; iipokotshi zecala zikhulu. Andiyikwesaba ngokukrakra ngamaketanga angamaqhekeza kwi-pack pack.
Ukuba uceba ukwenza uhambo oluninzi lwebusika, khangela ipakethe enokufikelela ngokukhawuleza kweepakethi zokubaluleka kwe-avalanche yokuhlala njengeprojefu kunye nefosholo.
Iingcebiso ezimbalwa zokukhetha iPakethe
Ngaba ugqoka ngathi uya kuhamba xa uhamba esitolo. Ukuba ibhanti yakho yepakthi iya kumnquba okanye ukutshatyalaliswa xa udibene neebhulukhwe zakho zokuhamba, uyafuna ukwazi kwangaphambili.
YIBHILE intambo ye-hip malunga ne-hipbones yakho, kungekhona isinquno sakho.
INGABE uthathe umthengisi phezulu kwisipho sakhe sokulayisha ipakethe ngeesantibagi kwaye akuvumele uhambe ngeenxa yokupakisha ipakethi kwithuba elithile.
INGABE ubeke ingqalelo apho uvakalelwa khona ubunzima bepakethe - ubuninzi babo kufuneka bahlale emagqabeni akho, kungekhona amahlombe akho.
YENZA ukusebenzisa i-pack sternum strap ukuze uncede ukunyusa ubunzima emagxeni akho (ngokukrazula i-straps ndawonye kancane).
Musa ukunyaniseka ngokucela uncedo kwenkqubo yokumiswa kwepakethi. Kufuneka ugcine ipakethe ilinganise kwaye isondele emzimbeni wakho.
INGABE ukhangele ukungena ngokukhawuleza, ukungena kwiindawo zokugcina izinto ofuna ukulungele ukufikelela kuzo: I-Bear spray, ibhotile yamanzi, ikhamera yakho, njalo njalo.
INGABE uzizwe ukhululekile ukuthenga "ukunyuka" iipakethe kwakhona - zihlala zakhiwe ngokuqinisekileyo kwaye zincinci.
ZAMA ubuncinane ubuninzi beepakethe ngaphambi kokuba uthenge.
I-Finger White Finger: I-Treatment & Prevention